အကွိမျမြားစှာ Marvel Cinematic Universe ရုပ်ရှင်များသည်နောက်ကျခဲ့သည်
၂၀၂၂ များပြားသည် Marvel ရုပ်ရှင်တွေကနောက်ကျနေပြီ
19 / 10 / 2021 19 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 210 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ထာဝရက Black Panther Wakanda, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego 2022, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ရုပ်ရှင်တွေ, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Marvels, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး
Marvel သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲများစွာကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီး ၂၀၂၂ အတွဲများရရှိရန်ရှိသည်ဟုအချို့ကကြေငြာခဲ့သည်။
တရားဝင်ကြေငြာထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ Marvel က်ဘ်ဆိုက်slate ၏၊ Marvel Cinematic Universe ရုပ်ရှင်များကိုလတိုင်းလတိုင်းပြန်လည်တွန်းပို့ခဲ့သည် Lego ၎င်းတို့အတွက်အစုံသည်ဖြန့်ချိနိုင်သည် (သို့) အရင်းအမြစ်ကဲ့သို့အရာများထက်များစွာပိုမိုထင်ရှားနိုင်သည် Eternals ၏မော်ဒယ်များသို့တည်းမဟုတ်အစီရင်ခံတင်ပြချက်များသည်နှောင့်နှေးနိုင်သည်။
ဤတွင် MCU ဖြန့်ချိမှုအချိန်ဇယားနှင့်၎င်းတို့၏ယခင်ရက်စွဲများကိုဖော်ပြထားသည်။
အရူးမျိုးစုံ၏ Doctor Strange - ၂၀၂၂ ခုနှစ်မတ်လ ၂၅ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မေလ ၆ ရက်
Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး - ၂၀၂၂ ခုနှစ်မေလ ၆ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၈ ရက်
Black Panther: Wakanda Forever - ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၈ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်
အဆိုပါ Marvel၎ - နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၂၂ မှဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၃
Ant-Man and the Wasp: Quantumania-ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၃ မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၈ ရက်
ဤအရာများထဲမှကောလဟာလများကထောက်ပြသည် အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုးနှင့် Black Panther: Wakanda Forever အားလုံးသည် ၂၀၂၂ တွင်ဇာတ်ကားများ ၀ ယ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Doctor Strange in the Multiverse of Madness ဇာတ်ကားဟောင်းကိုဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင်ရုံတင်ပြသလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်၊ ၎င်းသည်ယခုဇာတ်ကားထက် ၂ လအနည်းဆုံး ၄ လစောသည်။
Thor: Love and Thunder အတွက်မော်ဒယ်တစ်စုံကိုမတ်လမှာကြေငြာခဲ့ပြီး ၂ လမတိုင်ခင် Black Panther: Wakanda Forever အတွက်ကောလဟာလသတင်းများထွက်ခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ရုပ်ရှင်များမတိုင်မီကောင်းမွန်စွာစတင်ခဲ့ပြီး Black Panther ၏အလားအလာသည်ခြောက်လမတိုင်မီဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Lego Group သည်ဤကောလာဟလများကိုအတည်မပြုပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုသတိနှင့်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ မှန်လျှင်၎င်းသည်နှောင့်နှေးရန်ဆိုလိုသည် Marvel Cinematic Universe ၏ဆိုလိုသည်မှာဇာတ်လမ်းတွဲများသည်နောက်သို့လိုက်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းသည်အလွန်နောက်ကျပြီး၎င်းတို့စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းဖြန့်ချိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေဤအချိန်ဇယားတွင်ကြေငြာထားသောအပြောင်းအရွေ့များသည်မထိခိုက်ပါ နိစ္စထာဝရ or Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးကိုယခုရရှိနိုင်သောတည်ဆောက်မှုများရှိသည်။
← နေ့၏အုတ်ပုံ: Cosmic Mirror
LEGO ၂၀၂၂ စာအုပ်များတွင် NINJAGO နှင့် Harry Potter မော်ဒယ်များသီးသန့်ပါ ၀ င်သည် →